कुलमानको पुनर्उदय कि बहिर्गमन ! - UrjaKhabar कुलमानको पुनर्उदय कि बहिर्गमन ! - UrjaKhabar
काठमाडौं । ‘ल कुलमानजी यो वर्षको दशैं तिहारमा काठमाडौं लगायत देशभर लोडसेडिङ हुनु भएन ।’
४ वर्षअघि तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले यसो भन्दा विद्युत् प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको अनुहारको भाव मलिन देखिएको थियो । उनले टाउको मन्त्रीको सामुन्नेबाट अन्यत्र मोडेका थिए ।
उनले अस्पष्ट हुँदै भनेका थिए, ‘सजिलो त छैन मन्त्रीज्यू तर प्रयास गर्नेछु ।’
घिसिङको बोलीलाई मन्त्री शर्माले आक्रमणको शैलीले प्रतिकार गरे, ‘प्रयास होइन । मलाई नतिजा चाहिन्छ । नत्र तपाईंलाई किन ल्याएको ?’
हुन पनि मन्त्री शर्मा छापामार युद्धबाट सार्वजनिक हुँदै मन्त्रीको स्थानमा पुगेका हुन् । अरू छापामारहरू भन्दा उनी भिन्न देखिन्थे । ‘कम्तीमा आफ्नो कार्यकालमा केही परिवर्तन गरुँ’ भन्ने उनमा हुट्हुटी देखिन्थ्यो । उनको हाउभाउले परिवर्तनका केही संकेत पनि देखाएको थियो ।
२०७३ साल भदौ २९ गते घिसिङ प्राधिकरणको नेतृत्वमा आएको दिन । सम्भवतः असोजको पहिलो सातातिर शर्मा र घिसिङबीच उल्लेखित संवाद भएको थियो । संवादका साक्षी थिए, तत्कालीन सचिव अनुपकुमार उपाध्याय, सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरे लगायत केही वरिष्ठ अघिकारीहरू ।
शर्माले घिसिङलाई निर्देशनमात्र दिएनन् । आफूले सक्दो सहयोग गर्ने बचन पनि दिए । भने, ‘अँध्यारो हटाउन तपाईंलाई के कुराको सहयोग चाहिन्छ वा सहजीकरण गरिदिनुपर्छ, म तयार छु । तर, मलाई नतिजा चाहियो ।’
मन्त्रीका यी भाव मनन् गरेर बाहिरिएका घिसिङलाई ‘काम नदेखाई धरै छैन’ भन्ने लागेको हुनुपर्छ । सायद, इतिहासमा पहिलो पटक कार्यकारी निर्देशकले विभागीय मन्त्रीबाट यति दरिलो आडभरोसा पाएका थिए । अघिल्ला कार्यकारी निर्देशकहरूले त्यो सौभाग्य पाएनन् ।
कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति हुनासाथ कुत असुलेर मन्त्रीलाई बुझाउनुपर्ने हुँदा साँच्चिकै हिजोका हाकिमहरूले भनेजसरी काम देखाउन सकेनन् । घिसिङ यस मानेमा भाग्यमानी हुन् । मन्त्री शर्माले उनलाई जुरुक्क उचालेर कार्यकारी निर्देशकको कुर्सीमा राखे । ‘काम गर । परिणाम देखाऊ । समस्याका अगाडि म उभिदिन्छु’ भने । जसका कारण घिसिङमा काम गर्ने आँट, साहस र उत्साह दोब्बर भयो ।
हुनत, उनी प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि काम गर्ने व्यक्ति हुन् । यो उनले चिलिमे कम्पनीमा पनि देखाएका थिए । तर, यहाँ मन्त्रीले नै उनलाई काँधमा बोकेपछि जाँगर दोब्बर हुनु स्वभाविकै थियो । उनी लागे, मन्त्रीले भने जस्तै नतिजा निस्कने गरी काम गर्न ।
अब त्यतिबेलाको परिस्थिति, लोडसेडिङ र घिसिङको कामको थोरै चर्चा गरौं ।
देशबासीका ठूला चाड दशैं र तिहार । यी चाडमा सामान्य दैनिक गतिविधि बाहेक ठूला कामहरू हुँदैनन् । औद्योगिक क्षेत्र प्रायः बन्द रहन्छन् । घरायसी ग्राहकको माग केही बढे पनि औद्योगिक क्षेत्रले खपत गरिरहेको बिजुली जगेडा हुन्छ । औद्योगिक क्षेत्रमा जगेडा हुने बिजुली घरायसीमा वितरण गर्दा माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन मिलाउन त्यति धेरै महाभारत हुँदैन ।
देशमा औपचारिक रूपमा लोडसेडिङ भएदेखि हरेक वर्ष दशैं–तिहारमा खासै बिजुली काटिदैनथ्यो । यसको मुख्य कारण औद्योगिक लोड घट्नु र त्यो ग्रार्हस्थमा वितरण गर्नु नै हो । प्राधिकरणले २०७३ सालको दशैंमा पनि यही विधि अपनायो । दशैंमा बिजुलीको गर्जो टर्यो ।
दशैं सकिएलगत्तै तिहार सुरु भइहाल्छ । यो बीचमा पनि उद्योगधन्दा तथा कलकारखाना सञ्चालन व्यापकरूपमा भएको हुँदैन । तिनले खपत गर्ने बिजुली पूर्णरूपमा उपभोग गरेका हुँदैनन् । यद्यपि, दशैंको तुलनामा तिहारमा बिजुलीको माग केही बढी हुन्छ । कारण, बन्द उद्योगधन्दादेखि घरघरमा बत्ती बालिन्छ । दिपावली गरिन्छ । चाहिने नचाहिने ठाउँमा बिजुली बालेर उज्यालो बनाइन्छ ।
हर्षोल्सालको पर्व भएको हुँदा गाउँ, सहर, टोल, गल्ली हरेक ठाउँ जाज्वल्यमान हुन्छ । तिहारको विशेषता पनि यही हो । यही कारण दशैंको तुलनामा तिहारमा बिजुलीको माग केही बढी हुन्छ । प्राधिकरणले विगत वर्षमा यस्तो बेला निकै मितव्ययी तरिकाले माग आपूर्तिबीच सन्तुलन मिलाउँथ्यो ।
अझ प्रणालीले नधान्ने हुँदा नचाहिने ठाउँमा बिजुली नबाल्न पनि अनुरोध गर्थ्याे । तर, २०७३ सालको तिहार नजिकिँदै जाँदा प्राधिकरणले बत्ती कम बाल्न वा अनावश्यक प्रयोग नगर्न भन्ने खालको कुनै सूचना निकालेन । प्राधिकरण (घिसिङ) तिहारमा सर्वसाधारणले मन फुकाएर बत्ती बालुन् भन्नेमा थियो ।
हरेक वर्ष बिजुलीको उच्चतम माग तिहारको लक्ष्मीपूजाकै दिन हुन्छ । २०७३ सालको लक्ष्मीपूजा नजिकिँदै थियो । उता औद्योगिक क्षेत्र बन्द थिए । खोला–नदीमा पानीको बहाब सन्तुलित थियो । कुलेखानी जलाशयको अवस्था प्रतिकूल थिएन । यी सबै आधार र विद्युत्गृह पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी आपूर्ति मिलाउने प्राधिकरणको योजना थियो ।
घिसिङ सहित प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरू लक्ष्मीपूजाको दिनको खड्गो टार्न तम्तयार थिए । उक्त दिन साँझ घिसिङ सहितको टोली प्राधिकरणको स्यूचाटारस्थित भार प्रेषण केन्द्रमा पुग्यो । र, चनाखो भएर मागको अवस्था नियाल्न थाल्यो । त्यतिबेला पंक्तिकार सहित केही पत्रकार पनि उपस्थित थियौं ।
६ बजेपछि मागको मिटर विस्तारै माथि चढ्न थाल्यो । माग र आपूर्ति संकेत देखिने पावर बोर्डमा जब माग बढिरहेको देखिन्थ्यो तब घिसिङ र उनका सहकर्मीको मुटुको धड्कन पनि त्यसरी नै बढिरहेको अनुभूति गर्न सकिन्थ्यो । किनकि, देशका सबै विद्युत्गृह पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न घिसिङले निर्देशन दिएका थिए ।
यदि, बढिरहेको लोड, प्रसारण लाइनभन्दा बढी विद्युत् प्रवाह हुँदा तार चुडेर वा आगो लागेर प्रणाली नै ध्वस्त हुनेसम्मको खतरा थियो । देशभर जेजति प्रसारण तथा वितरण लाइन थिए÷छन् । ती पूर्ण स्वस्थ छैनन् । यस्तो बेलामा पूर्ण लोडमा विद्युत्गृह चलाउनु वा प्रसारण लाइनमा बिजुली बगाउनु साँच्चिकै चुनौती थियो ।
यही कारण हिजोका प्रशासक वा व्यवस्थापकले प्रणालीका लागि भनेर केही बिजुली (१० प्रतिशत) जगेडा राख्दा रहेछन् । घिसिङले ‘पूर्ण क्षमतामा प्रणाली सञ्चालन गर्नू’ भनेपछि यो कुरा बाहिर आएको थियो ।
प्रणालीमा खराबी आए देशै अन्धकार हुने खतरा थियो । यसो हुँदा घिसिङहरूको मुटुको धड्कन बढ्नु स्वभाविकै थियो । करिब ७ बजेतिर जब माग १३ सय मेगावाट वरिपरी नै पुगेर रोकियो तब घिसिङ सहित प्राधिकरण अधिकारीहरूले लामो सास फेरे ।
यसबाट दुई वटा काम सफल हुने देखियो । पहिलो, लक्ष्मीपूजाको खड्गो टर्यो । यो त अघिल्ला वर्षहरूमा पनि टरेकै थियो । दोस्रो, भएकै बिजुलीबाट लोडसेडिङ न्यूनिकरण गर्न सकिने भयो । विद्युत्गृह तथा प्रणालीलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउने जोखिम घिसिङले लिएकै हुन् । जुन अघिल्ला कार्यकारी निर्देशकले लिन सक्दैनथे वा ‘प्रणाली ध्वस्त हुन्छ’ भनेर डराउँथे ।
घिसिङले २०७३ लक्ष्मीपूजाकै दिन ‘अब देशमा लोडसेडिङ हटाउन सकिन्छ’ भन्ने बुद्धत्व प्राप्त गरे । ‘प्राविधिक रूपमा सम्भव रहेछ’ भन्ने भयो ।
यहाँनिर, घिसिङले जोखिम लिन सक्नुको पछाडि फेरि पनि तत्कालीन मन्त्री शर्माको हात थियो । उनको न्यानो साथ नपाएको भए सायद घिसिङमा त्यो हिम्मत हुने थिएन होला । भएकै बिजुली व्यवस्थापन गरे लोडसेडिङ कम गर्न सकिन्छ भन्ने पुष्टि भएपछि प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकाबाट लोडसेडिङमुक्त घोषणा सुरु गर्यो ।
लोडसेडिङ कसरी हट्यो ?
लोडसेडिङमुक्त घोषणा गरेर मात्र हुँदैनथ्यो । त्यसको व्यवस्थापन गर्न उतिकै चुनौती थियो । तिहारपछि विस्तारै उद्योगकलकारखाना सञ्चालनमा आउँथे । तिनले खपत गर्ने विद्युत् सर्वसाधारणबाट घट्थ्यो । र, पुनः लोडसेडिङ हुन सक्थ्यो ।
उता घिसिङले उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त घोषणा गरे यता माग र आपूर्ति मिलाउन चुनौती थियो । लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा मन्त्रीको मुखबाट हुनुपथ्र्याे । किनकि, यसका योजनाकार नै शर्मा थिए । तर, त्यो हुन सकेन । सर्वसाधारणले भने घिसिङको जयजयकार गर्न सुरु गरे ।
हुनत, घिसिङ कार्यकारी निर्देशक नभएर अर्को व्यक्ति भएको भए पनि कात्तिक (लक्ष्मीपूजा) मा नभए एक–दुई महिना ढिलो लोडसेडिङ अन्त्यको थालनी हुन्थ्यो । तैपनि, घिसिङलाई माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन मिलाउने चटारो थियो । यसका केही कारणहरू चर्चा गरौं ।
१. घिसिङले सुरुमा उद्योगीहरूलाई बोलाएर छलफल गरे । र, उच्च मागको समयमा उद्योगधन्दा नचलाइदिन अनुरोध गरे । यसो हुँदा उद्योगमा गइरहेको बिजुली घरायसीमा दिन सकिन्थ्यो । उद्योगीले घिसिङको अनुरोध स्वीकारे । बिहान बेलुकी उच्च माग हुँदा औद्योगिक क्षेत्रमा खपत भइरहेको करिब साढे ३ सय मेगावाट घरायसीमा बाँड्न थालियो । यद्यपि, यो समयमा उद्योगले कति नोक्सान बेहोरे त्यसले अर्थतन्त्रमा कति असर गर्यो ? छुट्टै विश्लेषण गर्न जरुरी छ ।
२. देशभरका हरेक उद्योगमा क्यापासिटर बैंक राख्न दबाब दिइयो । यसले थोरै बिजुली हुँदा पनि किफायत गरेर प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो । प्रणाली बिग्रनबाट जोगिन्थ्यो । घिसिङको यो कुरा पनि उद्योगीले मानिदिए ।
३. अघिल्ला वर्षहरूमा भारतबाट विद्युत् आयात गर्ने बाटो साँधुरो थियो । अर्थात् सीमित प्रसारण लाइनबाट करिब २ सय ५० मेगावाटमात्र आयात हुन सक्थ्यो । घिसिङको पालासम्म आइपुग्दा भारतबाट करिब ५ सय मेगावाट आयात गर्ने पूर्वाधार बनेको थियो ।
डेढ दशकदेखि रोकिएको खिम्ती–ढल्केबर २२० केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएको थियो । उता ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४ सय केभी अन्तरदेशीय लाइन तयार थियो । यहाँबाट मात्र करिब १ सय ६० मेगावाट आयात गर्ने आधार बनेको थियो । अहिले २ सय ६० मेगावाटसम्म ल्याउन सकिन्छ ।
केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा २०७२ फागुन ७ गते अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको उद्घाटन भएको थियो । त्यहाँबाट सुरुमा ८० मेगावाट बिजुली आयात गरिएको थियो । लोडसेडिङ अन्त्य गर्न आयातित बिजुलीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो ।
४. यता स्वदेशी निजी क्षेत्रले हरेक वर्ष प्रणालीमा बिजुली थपिरहेको थियो । निजी जलविद्युत् उत्पादकले वर्षको करिब सय मेगावाट बिजुली प्रणालीमा प्रवाह गरिरहेका थिए । जबकि, त्यतिबेला सरकारबाट कुनै आयोजना बनिरहेका थिएनन् । यसले पनि लोडसेडिङ अन्त्य गर्नका लागि बिजुलीको जोहो गर्न सजिलो बनाएको थियो ।
५. २०७२ साल बैशाख १२ गतेको भूकम्पका बेला अधिकांश प्रसारण तथा वितरण संरचना छिन्नभिन्न भएका थिए । त्यसलाई अघिल्लै कार्यकारी निर्देशक (मुकेशराज काफ्ले) को पालामा पूर्ण रूपमा रिहाब (मर्मत, सम्भार सुधार तथा स्तरोन्नती) गरिएको थियो । धेरै ठाउँमा नयाँ ट्रान्सफर्मर फेरिएको थियो । यो पनि लोडसेडिङ अन्त्यको कारण बन्यो ।
६. चुहावट नियन्त्रण तथा चोरी नियन्त्रणमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलियो । यसमा घिसिङको ठूलो सक्रियता थियो । चुहावट नियन्त्रणमा कमी आउँदै गयो । चोरीको बिजुली प्रणालीमा आयो । जुन लोडसेडिङ हटाउन सहायक बन्न गयो ।
५. घरघरमा सिएफएल चिमको साटो लिड बल्ब प्रयोग गर्न निर्देश गरियो । यो हुँदै पनि आइरहेको थियो । यसलाई थप प्रचारप्रसार गरियो । उपभोक्तालाई थोरै दबाब त धेरै प्रेरित गरियो । ‘घिसिङ जयजयकार युग’ सुरु भइसकेको हुँदा यसलाई उपभोक्ताले सजिलै स्वीकारे ।
६. घिसिङ आफैं प्राधिकरणका कर्मचारी त्यो पनि प्रणाली सञ्चालनमा निकै राम्रो दख्खल भएका । कसरी काम गर्दा नतिजा आउँछ भन्ने थाहा थियो । अर्कोतर्फ, मन्त्रीदेखि सरकारसम्मको पूर्ण सहयोग र समर्थन थियो । जबकि, यस्तो सहयोग इतिहासमा कुनै पनि कार्यकारी निर्देशकले पाएनन् । यही कारण पनि लोडसेडिङ अन्त्यको योजना ठोस् विन्दुमा पुग्न सक्यो ।
७. इन्जिनियरहरूका अनुसार निरन्तर विद्युत् दिएपछि मागमा धेरै ठूलो उतारचढाव आउँदैन । निरन्तर विद्युत् आएपछि ग्राहकले आवश्यक परेको समयमा मात्र घरायसी विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्छन् । ह्वात्तै माग बढ्ने र घट्ने हुँदैन । केही बिजुली बचत हुन्छ । उच्च माग व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ । यसलाई पनि लोडसेडिङ अन्त्यको कारण मान्नुपर्छ ।
लोडसेडिङ अन्त्य हुनुमा यी विविध कारणहरू जिम्मेवार रहे । तर, सर्वसाधारणले घिसिङ आउने बित्तिकै ‘जादूको छडी’ले लोडसेडिङ अन्त्य भएको ठाने । सर्वसाधारणले यसो ठान्नु स्वभाविक पनि हो । किनकि, उनीहरूलाई बिजुली बाल्नु वा उज्यालोसँग मात्र मतलब हुन्छ ।
त्यो भारतबाट आएको होस् वा देशमै उत्पादन भएको बिजुलीबाट । प्राविधिक पक्ष र यसका कारण सामान्य उपभोक्तालाई चासो हुनुपर्दैन । तर, विद्वान, विश्लेषक वा अर्थशास्त्रका ज्ञाताले समेत अन्य पक्ष केलाउने प्रयास नगरी घिसिङकै कारण देश उज्यालो भएको तर्क पेश गरे ।
मन्त्रालय मातहत अनेकौं ठूला निकाय छन् । त्यहाँ रहेर पनि घिसिङले ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ हुने गरी काम गर्न सक्छन् । उनको जीवन इन्जिनियरका रूपमा विद्युत् क्षेत्रमै घोलिएकाले जहाँको जिम्मेवारी पाए पनि विद्युत् विकासमा योगदान पुर्याउन सक्छन्, प्राधिकरण नै चाहिँदैन ।
जसै देशका विभिन्न ठाउँमा लोडसेडिङ अन्त्य घोषणा गरियो त्यहाँ उपभोक्ताले घिसिङको दिपावली मनाए । उनलाई एउटा कर्मठ सिर्जनशील कर्मचारी, आफ्नो जिम्मेवारीमा सजग व्यक्तिभन्दा माथि राखियो । मानौं, घिसिङ भगवान हुन् । उनी बिना यहाँ केही हुँदैन जस्तो प्रचार भयो । सर्वसाधारणले यसो गर्नु स्वीकार्य हुन्छ तर वास्तविकता बुझ्नेहरूले समेत तथ्य कुरा बाहिर ल्याउन सकेनन्/चाहेनन् ।
घिसिङ आफैंले पनि मिडियामा चाहिनेभन्दा बढी प्रचार गरे । ‘हिजोका कार्यकारी निर्देशकले जनतालाई अँध्यारोमा राखे । आज मेरै कारण देश अँध्यारोमुक्त भयो’ भन्ने अभिव्यक्ति बाहिर आए । काम गरेको व्यक्तिलाई प्रचारको भोक हुनु स्वभाविक हो, जस्तो ‘दिनभरि जोतेर आएको गोरुलाई एक मुठ्ठो घाँस खाने लोभ हुन्छ’ ।
तर, घिसिङको चर्चाले सीमा नाघ्यो । जुन प्रचार मन्त्री जनार्दन शर्माबाट हुनुपथ्र्यो । त्यो भएन । यही कारण आफैंले बोकेर कुर्सीमा बसालेका शर्मा र घिसिङबीच नै तिक्तता पैदा भयो । अझ, घिसिङले यतिसम्म भन्न भ्याए– फटाहहरूले जनतालाई अँध्यारोमा राखे । ती कुरा मैले बाहिर भनिदिने हो भने जनताले सडकमै समातेर पिट्छन् ।
यसो भनिरहँदा उनले हिजो कसले बदमासी गर्यो ? त्यो व्यक्ति स्पष्ट खुट्याउन सकेनन् । न त्यस्ता व्यक्तिको नाम नै भन्न सके । ‘बिजुली लुकाएर उद्योगीलाई दिनेहरूलाई कारबाही हुन्छ’ भन्दै हिँडे तर कसैलाई कारबाहीको सिफारिस गर्न सकेनन् । मन्त्री शर्माले पनि ‘जनतालाई लोडसेडिङमा राख्नेको नाम सार्वजनिक गर्ने’ बताए । त्यो कहिल्यै भएन ।
घिसिङले विगतमा भएका कामको अवमूल्यन गरे । ऊर्जा क्षेत्रमा आजको भोलि नै परिणाम आउने होइन । यो वर्षौंदेखिको काम जोडिँदै आएर नतिजा देखिने हो । यहीँनिर, घिसिङले इतिहास बिर्से । ‘हिजोकाले फट्याइँ गरे । अपराध गरे । मैले मात्र राम्रो गरेँ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिइरहे ।
अनुभव, क्षमता र नेतृत्वको शैलीका कारण इतिहासमा कसैले बढी वा घटी गर्यो होला तर काम नगरेको भन्ने जुन सन्देश बाहिर आयो । यसबाट घिसिङमा दम्भ र अहंकार बढ्दै गएको प्रस्ट देखिन्थ्यो । जसले इतिहासमा भएका कामको समीक्षा गर्दैन । त्यसलाई सम्मान गर्दैन, त्यो जतिसुकै सक्षम नेतृत्व भए पनि संस्थामा थिति बसाल्न सक्दैन ।
अझ ‘मिडियामा लुकाएको बिजुली घिसिङले बाहिर निकाले’ ‘लोडसेडिङमा राख्ने अपराध’ जस्ता खबर निरन्तर दोहोरिइरहे । यस्ता कारणले पनि घिसिङको राजनीतिक दलसँगको निकटता फराकिलो हुँदै गयो । र, पछिल्लो समय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनसँग उनको सम्बन्ध सुमधुर हुन सकेन ।
यद्यपि, घिसिङले आफ्नो क्षमता, दक्षता र नेतृत्व अनुसार काम गर्न कुनै कसुर बाँकी राखेनन् । उनी प्राधिकरणका यस्ता कार्यकारी निर्देशक पनि हुन्, जो १४–१५ घन्टासम्म निरन्तर खटेर काम गरे । आयोजनास्थलमा खटिए । काम गर्न दबाब दिए । यसले पछिल्ला वर्ष गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिमा इँटा थप्ने काम गर्यो ।
घिसिङको चर्चा भइरहँदा बीचमा उनले गरेका काम केही विवादमा परे । गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा २ करोड लिड बल्ब किन्ने निर्णय भयो । यो निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाटै गरियो । बजारमा ५ सय रुपैयाँसम्म पाइने बल्ब प्राधिकरणले १ सय ४० रुपैयाँमै बाँड्ने कुरा आयो । यो निकै राम्रो पक्ष थियो ।
तर, ‘भारतमा ६५ रुपैयाँ पर्ने बल्ब नेपालमा आधा बढीमा प्राधिकरणले बेच्ने’ भनेर ठूलो विरोध भयो । यसमा घिसिङमात्र होइन, सरकारका मन्त्रीहरू पनि विवादित बने । अन्त्यमा लिड बल्ब खरिद प्रक्रिया रोकियो । घिसिङलाई भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि उनले आफ्नो गल्ती नभएको भन्दै पत्रकार सम्मेलन नै गरे ।
पत्रकारका अगाडि भावुक हुँदै उनले भने, ‘मैले भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भए झुन्डिन तयार छु ।’ त्यस कार्यक्रममा उनका आँखा आँसुले भरिएका थिए । घिसिङका यी गतिविधि फेरि पनि मिडियामा ‘भाइरल’ भए । उनलाई सर्वसाधारणका प्रिय बन्नबाट कसैले रोकेन । कतिपय अवस्थामा घिसिङले परिस्थितिलाई हृदयंगम गरी ‘इमोशनल ब्ल्याकमेलिङ’ पनि गरे । जहाँ उनी सफल भए ।
जलविद्युत् तथा प्रसारण लाइन आयोजनाको निरिक्षणमा जाँदा उनले स्थानीय तथा सरोकारवालालाई धम्क्याएको विषयले समेत निकै चर्चा पायो । एक पटक त्रिशूली–३ ‘बी’ हब प्रसारण लाइनमा स्थानीयले अवरोध गरेको सहन नसकेर उनले धम्क्याए– एक दिन ढिलो हुँदा राज्यलाई कति नोक्साान हुन्छ ? तपाईंहरूलाई थाहा छ ? अब कसैले यहाँ काम रोक्यो भने लगेर थुन्दिन्छु ।
यस्ता गतिविधिले उनलाई धेरै चर्चा र केही बदनाम बनायो ।
अर्को, डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुलले उनलाई राम्रैसँग घुँडा टेकायो । २०७३ साउनदेखि उठाउनुपर्ने ट्रंक लाइनको महसुल प्राधिकरणले उठाएन । र, २०७५ को पुसतिर आएर मात्र बिल काटियो । यसमा उद्योगी व्यवसायीले ठूलो विरोध जनाए ।
विरोध जनाएपछि मन्त्री पुन तथा घिसिङले मिनाह दिने तयारी गरे । तर, सचिव दिनेशकुमार घिमिरे तथा केही सञ्चालकको असहमतिपछि महसुल उठाउने निर्णय भयो । करिब १२ अर्ब रुपैयाँ ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको महसुल अहिलेसम्म उठाइएको छैन । यसबारे सदनमा समेत घिसिङको आलोचना भयो । सार्वजनिक लेखा समितिमा त सांसद र घिसिङबीच भनाभन नै भयो ।
योसँगै वर्षौंसम्म प्रसारण लाइनको काम अगाडि नबढेको, समयमा नबनेको र घिसिङकै कारण कतिपय वितरण लाइनको ठेक्का रोकिएको आरोप लाग्यो । कमिसनको लोभमा वितरण लाइन तथा सबस्टेसनको जथाभावी ठेक्का गरेको र विद्युतीयकरण गर्न अर्बौं रुपैयाँको उपकरण किनेर थन्क्याएको आरोप पनि लुकेन ।
यी र यस्तै आरोप तथा उनका गतिविधिले उनको राजनीतिक र कर्मचारीतन्त्रसँग सम्बन्ध बिग्रिएको छ । पछिल्लो समय उनी आफैं पनि हच्केका छन् । निहुरिएका छन् । अझै पनि सर्वसाधारणको एउटा तप्कामा घिसिङको ‘जयजयकार’ भएको हुँदा उनी त्यसका लायक हुन कि होइनन् भन्ने समीक्षा भएको छ ।
अब उनको ४ वर्षे कार्यकाल सकिँदैछ । अहिले सामाजिक सञ्जालदेखि सर्वसाधारण र उनी निकट एउटा तप्काले कार्यकारी निर्देशकमा उनको निरन्तरता हुनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् । प्राधिकरण वा विद्युत् क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि उनको निरन्तरता जरुरी हो त ? यसमा पनि विमर्श भइरहेको छ ।
जनार्दन शर्माको भाषामा भन्ने हो भने घिसिङलाई लोडसेडिङ अन्त्यका लागि ल्याइएको थियो । जे जस्ता कारणबाट होस् देशबाट लोडसेडिङ हट्यो । त्यसको जस उनैले पाए । अब लोडसेडिङ (हिजोको घिसिङ) युग सकियो । प्राधिकरण तथा विद्युत् क्षेत्रलाई अर्को चरणको विकास (प्याराडाइम सिफ्ट) मा लैजानुपर्नेछ । यसमा पनि घिसिङ हिजो जसरी नै खटिन सक्दैनन् भन्न सकिन्न ।
तर, यसमा उनको आफ्नै व्यक्तित्व कति स्वस्थ रहन्छ भन्ने प्रश्न छ । घिसिङले हिजो र आजसम्म जे जति गरे– देश र आमसर्वसाधारणका लागि गरे । उनले इतिहासमा कसैले नपाउने ख्याती पाए । प्रख्याती कमाए । देउता बने/बनिए । ठूला–ठूला होर्डिङ बोर्डमा झुण्डिए । समालोचनाको तुलोमा जोख्ने हो भने उनको प्रख्यातिकै वजन बढी होला ।
अब उनका पाइला विस्तारै ओरालो लाग्दैछन् । उनलाई हिजो राम्रो मान्ने, असल देख्ने, विद्वान ठान्ने वा विलक्षण प्रतिभाका प्रतिमुर्ति मान्नेहरूले नै उनलाई ‘खराब’ टिप्पणी गर्न थालेका छन् । उनकै गतिविधिले राजनीतिक वृतको एउटा तप्कामा खरो अलोचना सुनिन्छ ।
यो मुलुक, क्षमता, दक्षता, सीप वा अनुभवले पदमा पुग्न सकिने रहेन । हिजो घिसिङको शिरमा जनार्दनको हात थियो । उनलाई ल्याउन शर्मा हरेकसँग लडेका थिए । आज त्यसो गर्ने व्यक्ति विरलै देखिन्छ । घिसिङले ‘द्रव्य’ले खुसी पार्न सकेमात्र नत्र वाम राजनीतिक वृत उनको समर्थनमा उभिने संकेत देखिँदैन । यो अवस्थामा उनको कार्यकारी निर्देशकमा निरन्तरता प्रत्युत्पादक हुने देखिन्छ ।
घिसिङ दोहोरिए पनि हिजो जस्तै सर्वसाधारण भनौं वा जनताबाट स्याबासी, समर्थन वा वाहावाही पाउने लक्षण कदापि देखिँदैन । यसर्थ, अबको परिस्थितिमा उनका लागि सुरक्षित बहिर्गमन नै उत्तम देखिन्छ । हिजोको शाखकै कारण उनले अर्को संस्था वा निकायमा अझ राम्रो छवि निर्माण गर्न सक्छन् ।
डेडिकेटेड वा ट्रंक लाइनको महसुल उठ्नेवाला छैन । किनकि, उद्योगीहरू प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेर मिनाह गरिदिन भनिरहेका छन् । प्रसारण लाइन समयमा निर्माण हुन नसकेका कारण उनले दोष खेपिरहेका छन् । यसले नै घिसिङको चम्केको व्यक्तित्वमा कालो पोत्न सक्छ । राजनीतिक वृतमा उनको छवि थप धमिलो बनाउन सक्छ । यसर्थ, अहिलेको परिवेशमा उनको सुरक्षित बहिर्गमन नै फलदायी हुन सक्छ ।
घिसिङ काम गर्ने हक्की स्वभावका व्यक्ति हुन् । उनी निष्क्रय बस्न सक्दैनन् । यसो हुँदा बरु सरकारले बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती, तमोर वा अरू त्यस्तै ठूला जलाशय परियोजना निर्माणको जिम्मा दिन सक्छ । कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्ने जिम्मा घिसिङले पाए उनले त्यसलाई फत्ते गर्न सक्छन् ।
देशले गुणस्तरीय बिजुली पाउँछ । निर्यातका लागि पनि बिजुली जोहो हुन सक्छ । यसबाट देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र माथि उठ्न सक्नेमा दुई मत रहँदैन । होइन, यी आयोजनामा घिसिङलाई जिम्मेवारी दिन नसकिने हो भने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा सुशील ज्ञवालीको कार्यकाल सकिँदैछ । त्यहाँ घिसिङलाई पठाउन सकिन्छ ।
मन्त्रालय मातहत अनेकौं ठूला निकाय छन् । त्यहाँ रहेर पनि घिसिङले ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ हुने गरी काम गर्न सक्छन् । उनको जीवन इन्जिनियरका रूपमा विद्युत् क्षेत्रमै घोलिएकाले जहाँको जिम्मेवारी पाए पनि विद्युत् विकासमा योगदान पुर्याउन सक्छन्, प्राधिकरण नै चाहिँदैन । अतः जहाँ रहे पनि उनको आगामी कार्यकाल सुखद रहोस् ।